Cheese Cottage iyo keega yicib (gluten-free) - Recipe | Recipe
Cheese Cottage iyo Keega yicib (gluten-free)
Alicia tomero | 30/11/2021 22:37 | Quraac iyo Cunto fudud, Recipes, Cunnooyinka Bilaashka ah ee Gluten
Waxaad jeclaan doontaa keegan maadaama ay tahay cunto kariye lagu sameeyay jilicsan farmaajo cariish ah iyo yicib la shiiday. Cuntadani waxay ku fiican tahay dadka Dulqaad la'aan Gluten Waxaad arki doontaa sida aad u samayn karto keegan qalafsan adigoo leh dulqaad yar iyo si fudud. Waa inaad raacdaa tillaabooyinka si faahfaahsan si aad u hesho macmacaankan weyn.
Haddii aad jeceshahay cuntooyinkan qalafsan, waxaad isku dayi kartaa samayntayada keega oranji leh walnut iyo shukulaatada.
Waqtiga diyaarinta: 80 m
Waqtiga karinta: 60 m
Wadarta waqtiga: 2 saacadood 20 m
125 g subagga jilicsan
Sonkorta 240 g
300 g oo ah jiis
50 g oo bur galley ah
190 g oo yicib dhulka ah
4 ukun ah L
Laba qaado oo laga soosaaray vanilj
Laba cantoobo oo yicib la jarjaray
Laba qaado oo sonkor budo ah
Waxaan dhignay subag iyo sonkor. Isku darka gacanta iyo ulo ayaanu isku darnaa ilaa maaddooyinka la isku daro.
Waxaan kala saareynaa cad iyo jaallo. Ku dar subagga iyo sonkorta, laga soosaaray vaniljka iyo beedka hal mar, oo waxaan ku qaseynaa qasiyahayaga. Kadibna waxaan ku darnaa soosaarka vaniljka oo sii wad isku dhafka.
Waxaan ku darnaa burka yicib iyo bur galley waana garaacnay.
Waxaan ku darnaa curd oo waanu walaaqnaa. Waxaan u ogolaanay maaddooyinka inay si fiican u dhexgalaan.
Maddiibad ku ridnay nadiif ah oo ulaha nadiifka ah waanu ku garaacnay ilaa ay sameeyaan qarka u saaran baraf.
Waxaan ku darnaa caddaanka Isku darkii hore iyo spatula waxaan si tartiib ah u walaaqeynaa dhaqdhaqaaqyada baqshadda si mugga isku dar ah aan hoos loo dhigin.
Waxaan diyaarinaa a caaryada wareega ah taasi waxay noqon kartaa mid aan caaryar ahayn oo aadi karta foornada. Waxay noqon kartaa agagaarka Dhexroor 20cm iyo silikoon. Saldhigga caaryada waxaan dhigay warqad dubista si aan awood ugu yeesho inaan si fiican u furfuro keega dhamaadka karinta. Waxaan ku shubaa isku dar ah oo si fiican u siman dusha. Waxaan dhigeynaa laba sacab oo yicib ah sare. Waxaan ku ridnay foornada si 175 ° 60 daqiiqo, kulayl kor iyo hoos iyo inta u dhaxaysa. Marka la karinayo, waa in la ogaadaa in yicibtu aan aad loo dubay. Hadday sidaas tahay, waxaan dhigi karnaa gabal aluminium ah qiyaastii kala bar wakhtiga karinta ilaa dhamaadka.
Marka la dubayo waxaan u ogolaaneynaa qaboojin oo ku adeega sonkorta budada ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: warqad dhakhtar » Recipes » Cheese Cottage iyo Keega yicib (gluten-free)
Xiddig Christmas aad u fudud
Lasagna hilib iyo boqoshaada